प्रचण्ड सोझै जे’ल जान सक्ने बाटो खु’ल्यो: माओवादीभित्र खैलाबैला !
November 8, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्ड सोझै जे’ल जान सक्ने बाटो खु’ल्यो: माओवादीभित्र खैलाबैला !
काठमाडौ- तत्कालिन शाही नेपाली सेनाबाट बिद्राे’ह गरेर जनमुक्तिसेनामा समाहित भएका झलकुमार भगतलाई रि हा गर्न परेकाे रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतले आइतबार खारेज गरेकाे छ । झलकुमारका दाजु नन्दुलाल थारु भगतले गैर कानुनी थु|नाबाट मु’क्त गरिदिन भनी परेकाे रि ट उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश द्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडाको इजलासले उक्त निबेदन खारेज […]
November 8, 2021 N88LeaveaComment on गुडिरहेकै गाडीको सिटमा बिते लालबहादुर, सँगै बसेका कसैले पत्तै पाएनन्
दाङ । सल्यान एक यात्रुको यात्राकै क्रममा गाडीभित्र मृत्यु भएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-९ बेलुकाका ५४ वर्षीय लालबहादुर वलीको सोमबार गुडिरहेको गाडीको सिटमै मृत्यु भएको हो। राप्ती राजमार्गअन्तर्गत रुकुमबाट दाङको तुलसीपुर हुँदै नेपालगञ्जका लागि आउँदै गरेको बा प्र-०१००६-ख २५९४ नम्बरको हायसभित्र सिटमै बसेको अवस्थामा वली मृत्यु भएको हो। सँगै यात्रा गरिरहेका वलीको मृत्यु भइसकेको कुरा […]
५५ अर्व हैन, ५५ खर्व नै आएपनि एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ – कृष्णबहादुर महरा
November 8, 2021 N88LeaveaComment on ५५ अर्व हैन, ५५ खर्व नै आएपनि एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ – कृष्णबहादुर महरा
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले ५५ अर्व हैन, ५५ खर्ब नै आएपनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रेस सेन्टर रोल्पाको पाँचौ जिल्ला अधिवेशनलाई लिवाङमा सम्बोधन गर्ने क्रममा महाराले कुनै पनि हालतमा एमसीसी नेपालको पक्षमा हुन नसक्ने भन्दै उक्त कुरा बताएका हुन् । देशमा केही शक्तिहरूले […]
प्रधानन्यायाधीश हटाउन षड्यन्त्र गर्नेलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ मोसो दल्ने चेतावनी
November 8, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानन्यायाधीश हटाउन षड्यन्त्र गर्नेलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ मोसो दल्ने चेतावनी
काठमाडौं । जनताको आयोग महा–अभियानले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध षड्यन्त्र गरिएको भन्दै त्यो षड्यन्त्रलाई कुनैपनि हालतमा सफल हुन नदिने स्पष्ट पारेको छ । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा महाअभियान कार्यसमितिकी अध्यक्ष तारा बरालले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाउन षड्यन्त्र गर्नेहरुलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ मोसो दल्ने चेतावनी दिइन् । उनले भनिन्, ‘अब न्यायालय अवरुद्ध गर्ने र जनतालाई न्याय पाउनबाट बञ्चित […]
प्रधानन्यायाधीश जबरा कुनै हालतमा पछि नहट्ने, इजलास तोकेर अघि बढे
November 8, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानन्यायाधीश जबरा कुनै हालतमा पछि नहट्ने, इजलास तोकेर अघि बढे
काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडानबाट पछि नहट्ने भएका छन् । उनले निकटस्थसँग कुनै हालतमा राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेको बुझिएको छ । जबरा सर्वोच्च अदालतको काम नरोक्ने गरी बढेका छन् । सोमबार आफूसहित ६ वटा इजलास तोकेका छन् । जसमध्ये बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा ४ वटा संयुक्त र २ वटा एकल इजलास तोकिएका […]
संकट हटाउन कुन राशिले के गर्ने ?
November 8, 2021 N88LeaveaComment on संकट हटाउन कुन राशिले के गर्ने ?
अत्यन्त परि’श्रम र मेह’नतका बावजुद पनि कुनै काममा स’फलता पाइरहनु भएको छैन भने केहि दो’ष हुनसक्छ ।जीवनमा आ’र्थिक समस्या आइरहेको छ वा रो’किएको धन फिर्ता भएको छैन भने राशी अनुसारको केहि उपाय गरेमा यो समस्या हटेर जाने धा’र्मीक मान्यता छ । जा’न्नुहोस् राशी अनुसारको उपाय मेष राशी निय’मित सूर्य देवको आराधना गरी लक्ष्मी’नारायणलाई गुलियो खिर […]
प्रचण्डको कुल सम्पत्ति कति छ ?
November 8, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्डको कुल सम्पत्ति कति छ ?
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालका प्रमुख राजनीतिज्ञमध्ये एक हुन्। गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएका छन्। १० वर्षे शसस्त्र द्व,न्द्वको नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड विदेशमा चिनिएका नेपाली नेताभित्र पर्छन्। उनी वि.सं. २०११ साल मंसिर २६ गते कास्कीमा जन्मिएका थिए। पछि उनको परिवार चितवन सरेको थियो। यहाँ हामी […]
यी संकेत देखिए बुझ्नु अब दुःखका दिन गए : फलिफाप हुदैछ धनलाभ हुदैछ !
November 8, 2021 N88LeaveaComment on यी संकेत देखिए बुझ्नु अब दुःखका दिन गए : फलिफाप हुदैछ धनलाभ हुदैछ !
हिन्दु धर्ममा शुभ र अशुभको पुरानो मान्यता अझैपनि जिवितै छ । विभिन्न संकेतका आधारमा शुभ र अशुभका बारेमा जान्न सकिन्छ । त्यस्ता संकेतमा भविष्यमा हुने घटना परिघटनाका बारेमा सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ ।यस्तै खालका संकेतकामा सपना पनि एक माध्ययम हो । केही संकेत यस्ता हुन्छन जसले हामीलाई धन प्राप्त हुने बारेमा पहिले नै बताई दिन्छन् […]
नराम्रो सपना देख्नु भयो ? यसो गर्नुस् हुन्छ दोष कट्टा !
November 8, 2021 N88LeaveaComment on नराम्रो सपना देख्नु भयो ? यसो गर्नुस् हुन्छ दोष कट्टा !
सपनाले वास्तविक जीवनका धेरै पक्षबारे जानकारी दिन्छ । कहिलेकाही नराम्रा सपना देखिन्छन् जसका लगि केही विधि अपनाउनु जरूरी छ । यसो गरेको खण्डमा नराम्रा सपनाको दोष कट्टा हुन्छ । १. खराब सपना देखेर व्युँझियो भने फेरि सुतेपछी उत्त सपनाको असर समाप्त हुन्छ। २. अत्यन्तै अशुभ सपना देखे निम्न श्लोक तीन पटक वा यथाशक्य जप गरे […]
तिहारपछि ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, ताेलाकाे कति ?
November 8, 2021 N88LeaveaComment on तिहारपछि ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, ताेलाकाे कति ?
काठमाडौं । तिहारपछिको पहिलो कारोबारका दिन सोमबार नेपालको सुनचाँदी बजारमा छापावाल सुनको मुल्य प्रतितोला एक हजार ५०० ले उकालो लागेर ९२ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ । पहेँलो धातु गत बिहीबार प्रतितोला ९१ हजारमा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कानुसार सोमबार तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९२ रुपैयाँहजार रहने छ […]